अमेरिकामा तालमा डूबेर ५ जना नेपालीहरुको मृत्यु ! – Khabar PatrikaNp
अमेरिकामा तालमा डूबेर ५ जना नेपालीहरुको मृत्यु !
August 5, 2020 376
पानीमा डूबेपछि उद्धारकर्ताहरुले उद्धार गरि मेरिल्याण्डको युनिभर्सिटी अफ वाल्टिमोर वाशिङ्गटन मेडिकल सेन्टरमा ल्याएका थिए । त्यहाँ उपचार गर्ने क्रममा उनको निधन भएको थियो ।
भतिजा र अन्य साथीहरु समेत मिलेर गएका केसी पानीको मध्य भागमा पुगेपछि चिच्याएपछि सँगै पुगेका साथीहरु र अन्यले उद्दारको प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरु सफल हुन सकेनन् । पछि स्थानीय प्रहरी र उद्दार कर्ताहरुलाई ९११ मा खवर गरेपछि तुरुन्त हेलिकप्टर सहितको टोलीले उद्धारको प्रयास गरेको थियो ।
अमेरिकाबाट सञ्चालन भइरहेको अनलाईन पोर्टल खसोखसको सहयोगमा
Prevयुट्युवरले आफ्नो बदनाम गरेको भन्दै रुष्ट भएकी पुष्पालाई छिमेकीले साथ(भिडियो)
Nextइन्डियन आर्मीले विवाह भएको पाँच वर्ष पछि आफुलाई अलपत्र पारे भन्दै युवती रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
आफ्नो मुर्ति देखेर धुर्मुस आफै चकित परे र भने उच्च सम्मान छ समाज
ओलीको तानाशाहीले गणतन्त्र बच्दैन : अष्टलक्ष्मी शाक्य
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33410)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25071)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19439)